Function Tour | Piedra (Xiamen) Sculpture Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD., amin'ny maha-orinasa mpanao sarivongana matihanina miaraka amin'ny mpamorona sy ny orinasanay manokana, izay manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sary sokitra vy, sarivongana varahina, sary vongana resina fiberglass. Manome vokatra tsara foana izahay, fifehezana kalitao tsara, serivisy tsara indrindra amin'ny serivisy amidy amin'ny mpanjifa. Ny fahafaham-ponao no antony manosika anay hamorona sary sokitra tsy mampino sy mahavariana.
Sary an'ny orinasa:
Sary fitaterana sy fonosana:
Ny OEM sy ny ODM dia samy raisina am-pitiavana! Ny mpanjifa tsirairay dia afaka manome skotika, sary 3D na CAD ho an'ny fanondroanay, avy eo isika afaka manao sary sokitra araka ny sary sy ny fepetra takian'ny mpanjifa.Manandrana ny tsara indrindra ataonay ny fanaovana sary sokitra ary miaro ny zon'ny mpamorona amin'ny famolavolana azy. Tsy hanenenanao mihitsy ny miara-miasa aminay amin'ny voalohany.
Tongasoa eto amin'ny serasera raha misy mahaliana ao amin'ny sary sokitra mahaliana anao. Ny mamaritra ny sary sokitra rehetra, ny loko, ny endriny dia azo hatsangana araka izay tianao.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD., dia mitazona ny hafanam-po lalandava handalina ny fahaizana sy ny hevitra vaovao, avy eo mamorona endrika vaovao hifanaraka amin'ny tsiron'ny mpanjifa. Raha toy ny sary sokitra vita amin'ny rindrina ankehitriny sy ny fitaratra dia afaka misafidy sary sokitra stainless vy izy ireo. Raha ho an'ny sarivongana tsy manam-paharoa sy misy zava-misy dia afaka misafidy sarivongana varahina izy ireo. Raha ho an'ny sary sokitra maivana sy mora vidy dia safidy tsara ho azy ireo ny sary sokitra fiberglass.
Tongasoa eto amin'ny serasera raha misy mahaliana ao amin'ny sary sokitra mahaliana anao.
Ny mamaritra ny sary sokitra rehetra, ny loko, ny endriny dia azo hatsangana araka izay tianao.
Adiresy: ROOM 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, DISTRICT HULI, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Telefaona Business 1: 00-86-8264336, 00-86-13950080662
Telefaona Business 2 : 00-86-13950110440
Telefaona Business 3 : 00-86-13600922114
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia efa za-draharaha ary efa nanondrana ny vokatra ho any amin'ny firenena maro, indrindra any Amerika, Eropa, toa an'i Norvezy, Asia toa an'i Malaysia, Indonesia, Singapore, Israel sy ny sisa.
"Karakarao am-pahatsoram-po ny mpanjifa, eritrereto tsara ny lazanin'ny orinasa sy ny kalitao tsara hahazoana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa" dia ny foto-kevitry ny fitantanana ny orinasa. Manantena tokoa izahay fa hivoatra sy hiara-hiasa amin'ny mpanjifa tsirairay, izay afaka manangana fifandraisana orinasa sy namana maharitra sy matanjaka. Tena tongasoa tokoa ny mpanjifa vaovao hifandray aminay raha mahaliana amin'ny sary sokitra izy ireo.
Ny fizotran'ny famokarana: